Nei Imbwa Chikafu iine Chikafu Kuchenesa | Martech Zone
Nei Imbwa Chikafu chiine Chikafu Chemavara
Mugovera, October 28, 2006 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Seth Godin anonyora nezvazvo vanyengeri uye Dilbert musiki Scott Adams anonyora nezve kubiridzira.
Zuva rega rega, pane mazana mazana emaanoshambadzira anoshanda nesimba, kuyedza kufunga nzira yekutsvedza mazano emakambani muhurongwa pasi pekufungidzira kuti ndeyemumba uye ndeyechokwadi.
Seti anoshamisika kuti vezvematongerwo enyika vaizotanga riini kushandisa vezvenhau… ndinofungidzira kuti haana kunzwa kuti Katherine Harris akatozviedza nebhulogi rake apo mushandi akataura mazwi ekutanga (akanyatsoteverwa kwavari nekero ye IP nemugari akangwarira) .
Kana rusununguko rusununguko ruripo, nei vakwikwidzi varefu vane vhudzi rakanakisa vanowanzohwina sarudzo?
Handina chokwadi kana iwe wakambonzwa nezve "nhema ngowani" maringe "chena ngowani" yekutsvaga injini optimization, asi ndiyo yakakwana dichotomy yenyaya iyi. Nhema Hat SEO ndiko kumisikidza kweinjini dzekutsvaga kuti uwane kuiswa kuburikidza nenzira dzisiri dzechokwadi. White Hat SEO ndeinjiniya yezviri mukati kunatsiridza kuiswa munzvimbo dzeKutsvaga Engines kuitira kugadzirisa mhedzisiro yebhizinesi Chinangwa chevaviri ndechekuvandudza kuiswa kwekutsvaga… asi chena ngowani iri kuzviita nekuti ivo vanofunga kuti inofanirwa kuve nekuiswa kuri nani.
Mhinduro yangu kune zvese kucherechedzwa kwaSeti uye zvakataurwa naScott ndezvekuti vanhu, vazhinji vacho, havazivi. Tinovimba kumeso, munhuhwi, mucherechedzo, kukwazisana ... neruvara. Ose aya masimba ekunze anomutsa manzwiro mukati medu. Vatengesi vanotarisira kuti iko kusanganiswa kwakanaka kwemanzwiro kunotitungamira kuti titenge. Kashoma patinoedza kuita basa rakaomarara kuti tinzwisise chimwe chinhu. Kana iwe uchinyatsoda kutengesa chimwe chinhu chisina kunaka kune mumwe munhu, vaudze kuti zvichaita sei nzwa, kwete kuti inoshanda sei.
Mimwe mimwe mienzaniso:
Paris Hilton kutengesa hamburger.
Verizon inotengesa yavo 'network yezviuru' kuseri kwako (ndinoshuva dai vaive kuseri kwekambani panzvimbo)
Nascar kutengesa UPS Kutakura
Heck, iwe unogona kunyange kurodha yako yaunofarira rwiyo kubva kuTide kushambadzira pa Tide saiti! Usanditenda? Heino imwe:
[odhiyo: https: //martech.zone/audio/tidesong.mp3]
Ndicho chikonzero chakafanana nei chikafu chembwa chiine chikafu chekudya. Imbwa vane bofu bvudzi havaoni mavara sevanhu. Ruvara haruwedzeri kuravira kana chikafu. Hazvina kunyengedza here kuti kambani yezvikafu imbwa iwedzere chikafu chekudya kune imbwa chikafu sezvazviri kune kambani kumisikidza kwekunyepedzera kutumira paDigg? Zvirokwazvo i… asi chokwadi ndechekuti vanhu vanozvitenga nekuti 'zvinotaridzika zvakanaka'. Ndiani anoda kutora nguva yekutarisa kumashure kwepakeji yemafuta emafuta, zvigadzirwa zvekugadzira, zvigadzirwa zvechisikigo… vazhinji vedu hatidi.
Chero bedzi paine bhenefiti yekumanikidza vanhu kana tekinoroji, iyo nhema ngowani ichagara iripo kutenderera kuti ibatsirwe nazvo.
API… Ndiani ari kuvaka APUI?
Simudzira WordPress ku2.05 pasina kukanganisa nzvimbo yako!
Gumiguru 30, 2006 na8: 36 PM
Ini ndaizotenga hamburger kubva kuParis uye ndicho chinangwa chekuwedzera, yakanaka infro
Kukadzi 13, 2008 na9:16 PM
imbwa HADZISI mavara-mapofu.
Iwe ungadai wakataura pfungwa yako usina kuratidza hupenzi hwako nekutaura kuti imbwa dzinovimba nekunzwa kwadzo kunhuhwirira, kupfuura kuona, uye naizvozvo kuvepa kwekudya kunongoita kuti chikafu chionekwe chakanyanya kunaka kune mutengi. Ndiri kuedza kuita tsvakurudzo pano, asi Indaneti haisi nzvimbo yakanaka kune iyo sezvo chero benzi rebenzi rinogona kunyora chinyorwa paIndaneti.
Kukadzi 13, 2008 na11:27 PM
Iwe wapotsa poindi yeposvo - chikafu chembwa hachina ruvara rwembwa, chine ruvara rwekuti munhu atenge. Hongu, imbwa dzinoona vamwe mavara.
Ndinovimba rimwe zuva maitiro ako anogona kubata nekugona kwako kupa mhinduro inobatsira.